छोरीको बिस्तारा बाट यस्तो चिज निस्कियो…अन्तिम मा पुलिस नै आउनुपर्यो !! के थियो आखिर ?सुनेर तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ] - Taja Report
Homeभिडियोछोरीको बिस्तारा बाट यस्तो चिज निस्कियो…अन्तिम मा पुलिस नै आउनुपर्यो !! के थियो आखिर ?सुनेर तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ]
छोरीको बिस्तारा बाट यस्तो चिज निस्कियो…अन्तिम मा पुलिस नै आउनुपर्यो !! के थियो आखिर ?सुनेर तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ]
July 19, 2018 भिडियो Comments Off on छोरीको बिस्तारा बाट यस्तो चिज निस्कियो…अन्तिम मा पुलिस नै आउनुपर्यो !! के थियो आखिर ?सुनेर तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ]
क्यान्सर लाग्न नै नदिने तरकारी र फलफुलहरु’ -डा. हेमराज कोईराला पुरा पढ्नु होस ।।
तुइन’ विस्थापन गर्न नसकिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई गायिकाले गरिन् १ करोड सहयाेग